Hogaanka iyo xubnaha xisbiga UPD oo dhiig u shubay walaalihii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ka dhacay Muqdisho – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
March 1, 2019 0 Comments by Abbas	in News
Guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka mudane Hassan Sheikh Mohamud oo ay wehliyeen xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka xisbiga ugu jira, xubno ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbiga oo wiilal iyo gabdho isugu jiray ayaa waxay saakay booqdeen dhaawacyada qaraxyadii xalay ee la geeyay Isbitaalka Erdogan “Ex Digfeer”, ayagoona dhiigooda u shubay walaalaha dhaawaca ah ee isbitaalka la seexiyay.
Xubnaha xisbiga UPD iyo hogaankooda ayaa caafimaad deg deg ah u rajeeyay bukaanadii ay ku booqdeen Isbitaalka iyo dhamaan dadkii ay waxyeeladu kasoo gaareen qaraxyadii xalay dhacay ee ku jira Isbitaalada magaalada Muqdisho.
Guddoomiya xisbiga mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Senator Cismaan Axmed Macow iyo xildhibaan Zakariye Gaashaan oo dhiig shubida kadib saxaafadda la hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay dhibtii kasoo gaartay qaraxyadii xalay ka dhacay Muqdisho, ayagoona si wadajir ah shacabka ugu baaqay in ay u midoowaan argagaxisada caadeysatay leynta shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn guddoomiyaha xisbiga UPD iyo xildhibaanada labada aqal ee la socday ayaa kulan gaar ah la qaatay maamulka Isbitaalka Erdogan “Ex Digfeer”, waxay uga mahad celiyeen sida hagar la’aanta ah ee ay u garab istaageen shacabka Soomaaliyeed ee dhibta soo gaartay.
Guddoomiyaha iyo mas’uuliyiinta xisbiga ee la socday ayaa maamulka Isbitaalka ka codsaday in dadka danta yar ee aanan heli karin qarashaadka loo fududeeyo oo aan wax qarash ah lagu xujeyn, maamulka Isbitaalka ayaana arintaasi ka garaabay oo sheegay in qorshuhu ugu jiray, codsiga mas’uuliyiinta xisbigana ay ka dhabeyn doonaan.
Xisbiga UPD oo si adag u cambaareeyay weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay Muqdisho